ZONKE IIMOVIE EZIBALASELEYO ZEMATRIX NGOKOLANDELELWANO LWAMAXESHA KUFUNEKA UBUKELE - ULUHLU LWEEMOVIE
Zonke iiMovie eziBalaseleyo zeMatrix ngokolandelelwano lwamaxesha kufuneka ubukele
I-Matrix franchise yakhutshwa nge-trilogy, ngokulandelelana kwexesha, libali lokuwa kwetekhnoloji yoluntu
I-Matrix franchise yakhululwa nge-trilogy, ngokulandelelana kwexesha, libali lokuwa kwetekhnoloji eluntwini elidale ubukrelekrele bokuzenzela kwaye lakhokelela ekuzaziseni. Ibali libandakanya ifilosofi, inkolo kunye nemibono yokomoya. I-Matrix igxininisa kwiintsomi, kwi-anime, kwimiboniso bhanyabhanya yaseHong Kong ngakumbi ukuphalazwa kwegazi leHeroic, ubugcisa beMartial. Inezinto ezenziwayo ze-bullet-time choreographed kunye neziphumo zokuhamba kancinci.
Umboniso bhanyabhanya wokuqala waba yimpumelelo enkulu kwezorhwebo, waphumelela amabhaso amane eAkhademi. 'Ipilisi ebomvu' kunye 'nepilisi eblue' zadalwa njengenkcubeko yokufuzisela. Ukudideka kuphakama xa kuziwa kumbuzo weyona ndlela ilungileyo yokubukela iodolo ngenxa yezongezo ezahlukeneyo ebalini, njenge-Animatrix, iMatrix, iMatrix ephinda ilayishwe, kunye neMatrix Revolutions zezi ziifilimu zintathu zidumileyo.
I-Matrix franchise yaqengqeleka ngonyaka we-1999 iphosa uKeanu Reeves njengoNeo, uMorpheus wadlalwa nguLawrence Fishburne kunye noTrinity wadlalwa nguCarrie-Ann Moss. Umboniso bhanyabhanya ungabagculeli kwaye ekugqibeleni, uNeo ufumanisa ukuba umhlaba ahlala kuwo awunangqondo kwaye wenziwe ngoomatshini abathintele uhlanga lwabantu.
UNeo uqeshwe nguMorpheus noZiqu-zintathu ukuba bahlangane ukuze balwe noomatshini kunye nelizwe elibambezelayo. I-franchise iqale njenge-trilogy, enye yeendlela zokuqala ukubukela uthotho lweMatrix kukuhamba ngomhla wokukhutshwa. Kwabafikayo, indlela ecacileyo kukulandela ixesha lethu lendalo. Ke, kuyacetyiswa ngokubanzi ukuqala ngeMatrix yoqobo. Xa ufutshane ngexesha, nikela kuqala kwi-trilogy yefilimu ephambili.
Izono ezisixhenxe ezibulalayo ze-anime ixesha le-2 netflix
Iimuvi zeMatrix ngokulandelelana koMhla wokuKhutshwa
1. IMatrix-Matshi 1999
Yimifanekiso bhanyabhanya yaseMelika yesayensi, ekhutshwe ngonyaka we-1999. Ikhokelwa yi-'Wachowskis 'kunye noJoel Silver eyivelisileyo. Ufakelo lokuqala lweenkwenkwezi ze-franchise uNeo njengoKeanu Reeves, uZiqu-zintathu njengoCarrie- Anne Moss, Hugo Weaving noJoe Pantoliano. UKeanu Reeves udlala umlingiswa uNeo, isigebenga sekhompyuter esifumana isigaba esinye ngokuqhubekekayo esonyusa umdla wakhe wokufuna ukwazi. Uhlala edibana nento ebizwa ngokuba yiMatrix.
Ukufumana iimpendulo zakhe, ukholelwa ukuba umntu ongaqondakaliyo 'uMorpheus' odlalwa nguLaurence Fishbone angaluncedo. UMorpheus kuthiwa uyingozi kakhulu. Kwenzekile wadibana no'Trinity 'odlalwa nguCarrie-Anne Moss, wanceda uNeo ukudibana noMorpheus okokuqala ngqa. Bobabini balwa neearhente ezikrelekrele. Kungekudala, uNeo waqonda ukuba umlo ngamnye umkhokelela kwiziphumo ezinkulu, ngaphezulu kakhulu kunokufa uqobo.
2. IMatrix Iphinda Yalayishwa kwakhona - ngoMeyi 2003
IMatrix iphinda ilayishwe kwakhona kukuqhubekeka kweMatrix kwaye yakhutshwa ngo-2003, yimboniso bhanyabhanya yaseMelika yesayensi. I-‘Wachowskis ’yayiqondisa kwaye yaveliswa ngu‘ Joel silver. ’Idabi elingapheliyo laqhubeka phakathi kukaCarrie-Anne Moss njengoTrinity, uKeanu Reeves njengoNeo, kunye noLaurence fishbone njengoMorpheus ngokuchasene neeMachines ezisecaleni. Ngaphandle kwezakhono ezibulalayo, ukulwa noomatshini kwakunzima. Ngexesha elifanelekileyo, uNeo wayiqonda indima yakhe ekusindiseni uluntu ngokucacileyo.
3. I-Animatrix-Juni 2003
Intshayelelo yomlawuli zombini ukungena, iMatrix, kunye neMatrix Iphinda yalayishwa. I-Osiris yindlela yokuhamba ngeenqanawa eyenzelwe ukulwa nokukhusela isixeko sabantu sokugqibela. Iyabhabha ukubanjwa ngabaSentinel ngokukhusela isixeko saseZiyon.
4. Uhlaziyo lweMatriki - Novemba 2003
ixesha lesithathu lekhowudi geass
Uhlaziyo lweMatrix 2003 lwakhutshwa ngoNovemba 2003 njengenyathelo lesithathu kwilungelo lokuthengisa iMatrix, lakhutshwa emva kweenyanga ezintandathu zokukhutshwa kweMatrix Reloaded. Kwinxalenye yesithathu, uNeo uzibhaqa evaleleke ekugxothweni. Uninzi lwehlabathi lubanjiwe ngoomatshini kwilizwe elibonakalayo, bayila. Ukuqhubeka nokusinda koluntu kuxhomekeke emagxeni kaNeo.
5. Ezayo: Matrix 4 - 2021
Ewe! uyive kakuhle. IMatrix 4 isemthethweni. Siza kuhanjiswa isavenge sesine se-franchise.
Iimuvi zeMatrix kunye neMidlalo ngokulandelelana kwexesha
Ukuba sele uqhelene nesiqalo emva koko ubukele imovie ngokusekwe kumda wayo wexesha, kukubanjwa. Nalu uluhlu lwazo zonke iimovie zeMatrix kunye nemidlalo ngokulandelelana kwayo.
1. I-Animatrix: Renaissance yesiBini, Icandelo 1 kunye 2
Kuthatha ukwenzeka ngenkulungwane yama-21 xa umatshini womlo wawunyanzelekile kwaye ubalulekile. Umqeqeshi ubalisa ibali ngokwembono yakhe, otolika iZiko loLondolozo lweZiyon, zonke iimbali zangaphambi komatshini zigcinwa kwindawo yokugcina izinto.
2. I-Animatrix: Inqaku leNgcaciso yeBali yokujonga
Uhlala ngokulandelelana kweemovie
U-Ash ngumcuphi ofumana umnxeba ukuba abukele ukuze enze iso lokujonga intombazana eyaziwa ngokuba yi-'Trinity ', isikhohlisi. Umboniso bhanyabhanya ujikeleze kuphando luka-Ash phambi kweMatrix isinika umva weTrinity.
Malunga ne-2199, Imovie yokuqala, iMatrix ifika. Kwinguqulelo yeMatrix, kwenzeka ngonyaka we-1999
4. I-Animatrix: Ibali leNtsana
Ibali lomntwana lenzeka ngokukhawuleza ukuba uNeo afunde malunga neMatrix evela kuMorpheus. Ibali lilandela umntwana othatha ipilisi eblue kunye namaphupha ngoNeo kwaye azame ukuqonda ukuba uthini ngeMatrix.
5. I-Animatrix, iNdiza yokugqibela
xxx (uthotho lwefilimu)
Umlawuli uvula zombini amangenelo, iMatrix, aze alandelwe nguMatrix Reloaded. IOsiris ngumkhosi wamanzi olwela iimfazwe ukukhusela isixeko sabantu sokugqibela nesisaphila. Iyabhabha ukubanjwa ngabaSentinel ngokukhusela isixeko saseZiyon.
6. Faka iMatrix
Ngumdlalo wevidiyo kwaye ugqobhoza ngoKugqibela ukulwa kweOsiris kunye neMatrix. Ibali lihambelana neMatrix ephinda ilayishwe ngumdlalo wevidiyo ngokunjalo.
7. IMatrix iphinda yaKhutshwa kwakhona
Kwiinyanga ezi-6 kamva 'iMatrix,' isongezo esitsha sihanjiswa esaziwa njenge 'Matrix Reloaded'.
8. Uhlaziyo lweMatrix
Iqala ukulandela iminyhadala ye-'Matrix Revolutions 'ngokukhawuleza okuthetha malunga neenyanga ezisi-7 emva' kweMatrix. '
9. IMatrix: Indlela kaNeo
Ngumdlalo wevidiyo, emva kokubukela imovie ezintathu kunye, lo mdlalo wevidiyo unqumla ixesha labo lonke. Into enomdla kukuba, iNdlela kaNeo inikezela ngesiphelo esinomdla.
10. IMatrix ekwi-Intanethi
cula umhla wokukhutshwa usa
Ngumdlalo odlala indima. Iyajikeleza ugqatso lokuqokelela iziqwengana zikaNeo ngokulandela imicimbi elandelayo yoHlaziyo. Kwenzeka emva kokusongwa kwe-trilogy kodwa imihla ngqo ayikhankanywanga.
11. I-Animatrix: Ngaphaya
Emva kwexesha elingenammiselo, irekhodi lehlabathi elingaphaya liza. Ibizwa ngokuba ayinasiphelo kuba akukho manzi anokuyidibanisa ibuyele kwenye indawo ngexesha.
12. I-Animatrix: Imatriki
Ixesha layo lexesha liyindawo enzima njengoko lingenayo ingcaciso ecacileyo malunga neziganeko zayo kunye nokwenzekayo
13. I-Animatrix: Inkqubo
Inkqubo yexesha kunzima ukuyichaza njengoko ibuhlungu.
iklasi lokufundela elite 2?
nini izilwanyana ezinobumnandi kunye nokuba ungabafumana phi
Ixesha le-salem 2 ngomhla wokukhutshwa kwe-Netflix
ikhowudi geass isizini 3?
hocus pocus 2 umhla wokukhutshwa 2021
Iimuvi malunga neApocalypse